Galmee jalqabuuf Fuula Duraa
Galmee xumuruuf Fuulaa Xumuraa
Galmee xumuruuf Fuula Xumuraa
Lakkoofsa fuulaawwan argii irratti mul'atan qindeessa. Durargii keessatti, tarsaan tokko akka banamuuf, lakkoofsa fuulaawwanii akka tarreewwan fi tarjaawwantti mul'atu filachuuf, xiyya isa sajootti aanee jiru cuqaasi.
Fuula jalqabaa duraargii fuulaa keessatti gara mirgaa irratti agarsiissuuf fili. Yoo hinfilatamnee, fuulii jalqabaa duraargii fuulaa keessatti gara bitaa irratti agarsiissama.
Mul'annoo galmee akka dhiihaatuuf, faaran guddisa.
Galmee harka caalu hamamtaa xinnoo tokko keessatti ilaaluuf, faaran xinnessa.
Argii Guutuu bani/cufi(Durargii fuulaa keessa)